Ashley Cole oo sharaxaad ka bixiyay sababta ka hor istaagtay Van Dijk inuu ku garaaco Messi abaal-marinta Ballon d’Or 2019 – Gool FM
Dajiye December 14, 2019
(Yurub) 14 Dis 2019. Daafacii hore xulka qaranka England iyo kooxaha Arsenal iyo Chelsea ee Ashley Cole ayaa wuxuu sharaxaad ka bixiyay sababta ugu weyn ee ka hor istaagtay Virgil van Dijk inuu ku garaaco Lionel Messi abaal-marinta Ballon d’Or 2019.
Ashley Cole ayaa si fudud u rumeysan in Lionel Messi, iyo sidoo kale Cristiano Ronald ee ku guuleystay abaal-marinta Ballon d’Or min Shan jeer oo horey, inay wali ku jiraan heer kale kubadda cagta ah oo ay kaga sareeyaan dhamaan ciyaartoyda kale, sababtuna ay tahay tayadooda toddobaad kasta.
Kabtanka Kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa dhawaan markiisii lixaad ee xirfadiisa kubadda cagta ku guuleystay abaal-marintan Ballon d’Or, waxaana uu ku garaacay Virgil van Dijk iyo Cristiano Ronaldo.
Ashley Cole Cole oo ka mid ahaa daafacyada ugu wanaagsan kubadda cagta muddadii uu la joogay kooxaha Arsenal iyo Chelsea, ayaa qirtay inuu doonayo inuu arko daafac ku guuleysta abaal-marinta Ballon d’Or mustaqbalka dhow.
Wargeyska “Daily Mirror” ayaa kasoo xigatay wareysi uu bixiyay Ashley Cole waxaana hadalkiisa ka mid ahaa:
“Virgil van Dijk weli waa uu ka hooseeya heerka Messi iyo Ronaldo, way adag tahay maxaa yeelay waxay u baahan tahay dadaal aad u weyn”.
“Run ahaantii, uma maleynaayo inaad Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo bannaanka saari karto”.
“Waxa uu sameynayo Lionel Messi Isbuuc kasta waa waxaan caadi aheyn, sidoo kale Cristiano Ronaldo, ku guuleysigiisa abaal-marintan layaab iguma noqonin, laakiin maalin uun waxaan dooneynaa difaac inuu ku guuleysto”.